नेपालबाहेक अरु कुन कुन देशमा मनाइन्छ दसैँ ? | Margadarsannew.com
नेपालबाहेक अरु कुन कुन देशमा मनाइन्छ दसैँ ?
त्यस्तै बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको श्रीलंकामा पनि हिन्दुहरूले दसैं मनाउँछन् । त्यसैगरी मलेसिया, थाइलेन्ड इन्डोनेसियाका हिन्दुहरुले मनाउँछन् । (एजेन्सी)